Guusha ay ka gaareen xulka dagmada Waaberi ciyaaraha dagmooyinka gobalka Banaadir – Bandhiga
Guusha ay ka gaareen xulka dagmada Waaberi ciyaaraha dagmooyinka gobalka Banaadir
Waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay sanadkii labaad muddo laga joogo 31 sano cayaaraha degmooyinka Gobolka Banaadir oo ay ka qayb galeen 17-ka degmo ee gobolka Banaadir ka kooban tahay.
Waxaa Finalkiisa isugu yimid degmooyinka Shibis iyo waaberi iyada oo ay si qurux badan ugu guuleysatay degmada Waaberi oo la dhihi karayo waa u qalantay in ay qaadaan koobkaan, marka la eego hab ciyaareedkooda.
Ciyaarta waxaa u soo daawasho tagay kumaan qof oo kamid ah shacbka magaalada Muqdisho iyo saraakiil ka socotay hay’adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya, waxaana goobjoog ka ahaa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo.
Kullankan ayaa qaybtiisa hore waxaa lagu kala nastay 1-0 oo ay ku hoggaamineysey degmada Waaberi waxaana ugu dambeyn ay ku soo idlaatay 1-0 oo ay ku badisay Waaberi.
Degmada Waaberi ayaa sanadkii hore ku guuleysatay koobkan, waxayna xilligaasi ay ka qaaday degmada Hodan oo looga adkaaday 3-1.
Dadka ku nool dagmada Waaberi ayaa ilaa manta u dabaal dagaya guusha ay soo hoyiyeen xulkooda, waxaana marba meel la geynayay Koobka ay ku guuleesteen, iyadoo ay xusid mudan tahay in ballaan qaadyo waa weyn loo sameeyay ciyaartoyda Waaberi, waxaana kamid ah in ay heli doonaan tababarro caalami ah.
Abaal-marino kala duwan ayaa lagu bixiyay gudaha garoonka.
Abaalmarinta waxaa bixinayay Madaxweyne Farmaajo oo masraxa ku sugnaa sidan ayaana loo kala bixiyay dhamaan abaalmarinada.
1: Koobka kaalinta koowaad waxaa la gudoonsiiyay Demada Waabari.
2: Kaalinta Labaad Degmada Shibis
3: Saddexaad Degmada Hodan
4: Gool dhallinta Saadaq Cusmaan oo ka tirsan Waabari
5: Macallinka tartanka C/laahi Laash oo hoggaamiyo Shibis
6: Goolhayaha ugu fiican tartanka Sakariye oo ka tirsan Waabari
7: Xiddiga ugu fiicanTartanka waa C/qani oo ka tirsan Shibis
8: Abaal-marinta Degmada Aqlaaqda sidoo kale ugu taageeraha badan tartanka waxaa la guddoonsiiyay degmada Kaaraan
Deg Deg: Dowladda Federalka oo ka hor timid guddiyada ay magacaabeen Puntland iyo Jubbaland